परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज - watv.org
परमेश्वरको मण्डलीले बाइबलअनुसार पिता परमेश्वर र
माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछ ।
हामी पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले देखाउनुभएको प्रेम, सेवा र बलिदानको उदाहरणलाई पछ्याउँदछौं ।
हामी परिवारमा प्रत्येकको भूमिका बोध गराएर खुशी परिवार निर्माणका लागि आपसमा कृतज्ञता अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहन दिँदछौं ।
प्रेम सुकेको यो संसारमा जिउने क्रममा गाह्रो र थकित भएकाहरूलाई बुबा र आमाको प्रेमद्वारा हामी उपहारस्वरूप उपचार र आराम दिँदछौं ।
२,००० वर्षअघि सुरुको परमेश्वरको मण्डलीले गरेजस्तै
हामी निस्तार-चाड र शबाथ-दिन लगायत नयाँ करारलाई
अमूल्य ठानेर पालन गर्दछौं ।
सन् विश्वव्यापी विश्वविद्यालय विद्यार्थी लिडरशीप सम्मेलन
परमेश्वरको इच्छाअनुसार संसारलाई डोऱ्याउने भविष्यका विश्व लिडर
७५औँ विदेश भ्रमण टोली
जीवनको पानीको मूल, माताको साथमा विशेष ग्रीष्म
Arise & Shine अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल गोष्ठी
विगत हजारौँ वर्षदेखि बाइबलविद्हरूले खोल्न नसकेका बाइबलको रहस्य ! त्यो रहस्यको चाबी नै ‘माता परमेश्वर’ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल गोष्ठीमार्फत प्रकट भयो ।
महादेश, देश, सहरअनुसारका मण्डलीहरूले नियमित भेला राखेर आपसमा
एकताबद्ध हुँदै नयाँ करार जीवनको सत्यता प्रचार गर्नको निम्ति असल उदाहरणहरू बाँड्नुका साथै अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्छन् ।
आजको "मन गोडमेल गर्दै"
अन्तिम भोज, निस्तार-चाड
के तपाईंलाई नयाँ करार निस्तार-चाड थाहा छ ?
महान् सृष्टिकर्ता परमेश्वर
के तपाईं अहिले मण्डलीको खोजीमा हुनुहुन्छ ?
परमेश्वर कहाँ वास गर्नुहुन्छ होला ?
योचाहिँ विश्वासमा प्रथम पाइला चालेका सन्तहरूको आत्मिक जिज्ञासा मेटाउने ठाउँ हो ।
आफ्नो अमूल्य परिवारलाई फूल उपहार दिनुहोस् !
खुशीले भरिपूर्ण सन्देशहरू
परिवार, छिमेकी वा साथीहरूको याद आउँदा यी कार्डहरूमा आफ्नो मन समावेश गरेर सन्देशहरू पठाउनुहोस् ।
WATV अनलाइन आराधना
भिडियो प्रवचन हेर्ने ।
worship.watv.orgमा गएर भिडियो प्रवचन हेर्नुहोस् ।
पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
सर्वशक्तिमान् परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई बोलाउनुभएर तिनीहरूद्वारा आफ्ना महान् कार्यहरू पूरा गर्नुभएको छ भन्ने…
हामी विश्व सुसमाचारको भिजन प्रदान गर्ने र सामाजिक सेवाको निम्ति विविध योजनाहरू बनाउने हेतुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दछौं ।
हामी विश्वका सबै मानव-जातिले मुक्ति पाउन सक्ने गरी नयाँ करारको सत्यता सुनाउँदै परमेश्वरको प्रेम बाँड्दछौं ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा विभिन्न देशका सरकारहरूसँगको साझेदारीद्वारा एकसाथ विश्व शान्ति र एकता निर्माण गर्दछौं ।
हामी परमेश्वरको वचनद्वारा सही चरित्र र व्यक्तित्व निर्माण गरी समाजमा उदाहरण बन्न सक्ने किसिमको शिक्षा दिन्छौं ।
स्वर्ण अवार्ड(सर्वोत्कृष्ट सङ्गठन पुरस्कार, १७ पटक)
आजीवन अवार्ड(सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति विशेष पुरस्कार)
परमेश्वर शुद्ध हृदयका हुनुहुन्छ, र उहाँको करार अपरिवर्तनीय छ । विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९का कारण सारा संसार अस्तव्यस्त भइरहेको बेला निस्तार-चाड नजिक आयो । सङ्क्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैगएको र विश्वमा महामारीलाई फैलनबाट रोक्न कर्फ्यू(shutdown) र बन्दाबन्दी(lockdown)का कदमहरू चालियो । पाप-क्षमा, मुक्ति र अनन्त जीवनको…
हामी देशको सिमाना, जाति, संस्कृति र भाषालाई नाघेर विश्वमा साझेदारी र सेवा कार्यान्वयन गर्दछौं ।
गरीबी र अनिकाल उन्मूलन
हामी मानव-जातिको शान्ति र खुशीको निम्ति UN SDGs[संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरू] प्राप्तिको निम्ति एकसाथ कार्य गर्दछौं ।
विभिन्न विषयका भिडियो प्रवचनहरू हेर्नुहोस् ।
परमेश्वरको मण्डलीले ६२ वटाभन्दा बढी भाषामा प्रवचनहरू उपलब्ध गराउँदछ ।
विश्वभरिबाट मिडिया रिपोर्ट
छिमेकी तथा समाजको निम्ति समर्पणयुक्त स्वयंसेवा कार्यहरू गर्ने
परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजको विषयमा
विश्वभरिका मिडियाहरूले रिपोर्ट गर्दछ ।
मण्डलीको परिचयात्मक भिडियो
​​माता परमेश्वरकहाँ आउनुहोस्
ASEZ परमेश्वरको मण्डलीका विश्वविद्यालय विद्यार्थी स्वयंसेवा सङ्गठन
ASEZ WAO जागिरे युवा स्वयंसेवा सङ्गठन